1. Ny fepetra voalohany indrindra aloha dia ny fisafidianana karipetra mifanaraka amin’ny efitranonao ary izay tinao ihany koa.
2. Tokony hifanaraka amin’ny haben’ilay efitra ny haben’ilay karipetra. Raha vao kely loatra ilay efitra dia tsy tokony ho lehibe ny karipetra. Faritra kely ihany no tokony ho rakofana an’io karipetra io. Loko malefaka sy karipetra tsy be sary ihany koa no apetraka ao amin’ny efitrano kelikely
3. Ireo karipetra mora diovina sy sasana no tsara ampiasaina, indrindra ho an’ny efitrano fisakafoana sy fandraisam-bahiny.
Manangom-bovoka ihany koa ny karipetra ka zava-dehibe ny fananana “aspirateur” raha toa ka mieritreritra ny hividy karipetra maromaro. Misy koa ny vovoka voatokana hanadiovana azy ireny, any amin’ireny tsena lehibe ireny ka ilaina ny fananana izany, raha mampiasa karipetra ao an-trano.